Kubva 24 Mbudzi, vanosvika vanhu vasere vanogona kutora chikamu mukuungana kwevanhu uye chiitiko cheveruzhinji muSweden. Kurambidzwa kunoshanda kwemavhiki mana.
Mufananidzo weTV pasvt inotepfenyurwa kubva kumusangano wehurumende wevatori venhau.
Tiri kurarama munguva inonetsa asi munguva yechiporofita. Iye zvino zvakakosha kupfuura nakare kose kurarama padyo naJesu Kristu. Kana usati wamugamuchira, chiite izvozvi nguva isati yakwana.
"Nhasi ndinogona kuzivisa kuti zvichatarisirwa kuti kubva musi wa24 Mbudzi vanhu vasere vanokwana kuenda kumusangano weveruzhinji uye chiitiko cheveruzhinji. Ichi chiitiko chinokatyamadza. Hazvina kana kufananidzwa munguva dzazvino, asi zvinonyanya kukosha kuitira kuti tikwanise kudzikamisa hutachiona ", anodaro Stefan Löfven.
Kurambidzwa uku kunoshanda kweanokwana vhiki ina kubva 24 Mbudzi, asi inogona kuwedzerwa.
Gamuchira Jesu izvozvi
Joh 1: 12-13. Asi vese vakamugamuchira, kwavari akavapa mvumo yekuva vana vaMwari, kune avo vanotenda muzita rake. Avo vakazvarwa kwete neropa, kana nekuda kwenyama, kana nekuda kwemurume chero upi zvake, asi naMwari.
Christer Åberg mune yehupenyu inogadziridza.
Vecka 23, lördag 12 juni 2021 kl. 22:45